Inona no azontsika ianarana amin'ny zanatsika isan'andro
Ny ankizy dia mahitsy sy mahitsy
Mampianatra sy mitaiza ny zanatsika araka ny hevitray izahay. Fa inona no hitranga raha mianatra avy amin'izy ireo isika olon-dehibe? Moa ve ny fiheverana toa ny zaza ho tombony, amin'ny asa isan'andro ihany koa?
"Ho lasa superstar aho". "Te-ho mpanamory sambon-danitra aho"
Manana sary an-tsaina ny ankizy. Ny ankamaroan'ny fotoana anefa dia miatrika zavatra ihany koa izy ireo rehefa toa tsy misy antenaina.
Inona no azontsika ianarana amin'ny zanatsika - © epixproductions / Adobe Stock
Na izany na tsy izany dia manao zavatra ry zareo. Mampihatra ny fanaovana sitraka amin'ny hafa izy ireo ary mianatra am-pahazotoana amin'ny tanjona napetrany, farafaharatsiny mandritra izao fotoana izao.
Fa ny sasany koa mametraka ny hevitry ny fahazazany ho fampiharana hatrany. Ny olon-dehibe kosa mahita ny olana sy ny sakana aloha.
Ka misy ve ny zavatra izay mialoha ny ankizy ary azontsika (averina) ianarana?
Azo antoka fa afaka mianatra zavatra avy amin'ny tsy fizahan-tavan'ireo ankizy ny olon-dehibe. Ny ankizy kely dia tsy mahita ny tontolony amin'ny maso hafa fotsiny, fa matetika kosa mahita azy kokoa amin'ny fomba feno kokoa.
Tsy fizahan-tavan'olona sy famoronana
Ohatra, ianao handoko sary izay mitantara ny tantara manontolo. Ireo dia mety ho endrika sy endrika rahona tsotra. Tsy ny miharihary fotsiny no ahitanao azy, fa koa mijery ny motifs amin'ny fomba fijery samihafa.
Rehefa mijery sary hosodoko malaza nataon'i Picasso, ohatra, inona no hitanao?
Ary koa, mpanakanto ny ankizy rehetra. Mamorona ianao, tsy mitsahatra mandoko zavatra, mandoko sary nofinofy ary mamorona zava-baovao. Tsy vitan'ny hoe mampiasa zavatra mifanaraka amin'ny tanjony fotsiny izy ireo, fa mampiasa ny eritreriny hivadika azy ireo ho vokatra vaovao tanteraka.
Ny zaza koa mamorona fatratra rehefa mamorona teny vaovao. Angamba izy ireo koa no mpanoratra kopia tsara kokoa?
Ny ankizy ankehitriny koa dia tafiditra amin'ny sehatra nomerika. Hizaha ny lalan'izy ireo manodidina ny takelaka na finday finday alohan'ny nahaizany nanoratra na namaky akory.
Tsy fantatrao ny tahotra na sakana tsy voavaha. Aza manahy koa raha manao fahadisoana. Farafaharatsiny mbola tsy. Izany dia ahafahan'izy ireo mianatra haingana sy mivaingana.
Ary misy toetra iray hafa ananan'ny ankizy, izay efa lanin'ny olon-dehibe sasany. Marina sy mahitsy ianao. Raha mahita kibo lehibe ny zaza dia mety hiteny tsotra hoe: "Manana kibo be ianao".
Ity fanambarana ity dia azo antoka fa tsy natao hanafintohina. Fanambarana fotsiny io. Fa raha milaza zavatra tena mahafinaritra ny ankizy kely dia matetika ny olon-dehibe tsy mihevitra an'io ho zava-dehibe na tsy miraharaha izany. Ny antony: niova be ny fomba fijerin'ny olon-dehibe.
Mandeha tsara kokoa ny zava-drehetra amin'ny tsiky
Fa ny tena zava-dehibe hadinon'ny olon-dehibe maro dia ny fomba fihomehezana. Hitan'ny mpahay siansa fa mihomehy 400 heny isan'andro ny ankizy. Ny olon-dehibe kosa dia mihomehy 15 ka hatramin'ny 20 isan'andro eo ho eo. Iza no faly kokoa amin'izany?
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 23. Jona 2021 15. Jolay 2021 Sokajy LifestyleKeywords family, ankizy, mianatra amin'ny ankizy, inona no azontsika ianarana avy amin'ny ankizy
indray Lahatsoratra taloha: Bathtub | Fiainana sy fahasalamana
more Lahatsoratra manaraka: Snacking - inona ary ohatrinona no avela?